News - nkwonkwo ohuru na ikike teknụzụ dijitalụ
nkwonkwo ohuru na inye ikike teknụzụ dijitalụ
Ka ọ dị ugbu a, mgbanwe dijitalụ abụrụla nkwenye nke ụlọ ọrụ, mana na-eche ihu na teknụzụ dijitalụ na-adịghị agwụ agwụ, otu esi eme ka teknụzụ rụọ nnukwu uru na azụmaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ bụ ihe ịma aka na ịma aka nke ọtụtụ ụlọ ọrụ. Na nke a, n'oge na-adịbeghị anya Summit Electric Schnoider Summit 2020, onye nta akụkọ gbara ajụjụ ọnụ Zhang Lei, osote onye isi oche nke Schneider Electric na isi nke azụmahịa ọrụ dijitalụ na China.
Zhang Lei (nke mbụ site n'aka ekpe) na nnọkọ gburugburu nke "njikọta ihe ọhụrụ na ikike teknụzụ dijitalụ"
Zhang Lei kwuru na n'ime mgbanwe nke dijitalụ, ụlọ ọrụ na-echekarị nsogbu atọ ihu atọ. Nke mbu, otutu ulo oru enweghi udiri ihe di elu na usoro nke mgbanwe dijitalụ, amaghi ihe kpatara eji eme digitization, ma ghara iche echiche zuru oke banyere uru nke Digitalization maka oru oru. Nke abuo, ọtụtụ ụlọ ọrụ anaghị ejikọta data na ọnọdụ azụmahịa, ma ghara ịmepụta ikike nyocha, nke na-eme data enweghị ike ịghọ ozi na-akwado mkpebi. Nke atọ, ọ na-eleghara eziokwu ahụ anya na usoro nke mgbanwe dijitalụ bụkwa usoro nke mgbanwe nhazi.
Zhang Lei kwenyere na iji dozie ọgba aghara nke ụlọ ọrụ na mgbanwe dijitalụ, na mgbakwunye na teknụzụ dijitalụ na ikike, ọ chọkwara okirikiri zuru oke na ọrụ dijitalụ nụchara anụcha.
Dịka isi ọrụ ọrụ dijitalụ, ọrụ dijitalụ nke Schneider Electric na-enwekarị ọkwa anọ. Nke mbụ bụ ọrụ na-agba izu, nke na-enyere ndị ahịa aka ịchọpụta ihe ha chọrọ na nsogbu ndị dị na azụmaahịa ụlọ ọrụ ahụ. Nke abụọ bụ ọrụ atụmatụ ngwaahịa. N'ime ọrụ a, Schneider Electric ga-arụ ọrụ na ndị ahịa iji hazie ọdịnaya ọrụ, chọpụta nke ngwọta kachasị dabara adaba, nke kachasị dị irè na nke kachasị adigide, na-enyere ndị ahịa aka ịhọrọ azịza kachasị mma na teknụzụ kachasị mma, belata ikpe na njehie, wee belata enweghị ego. Nke atọ bụ ọrụ nyocha data, nke na-eji ihe ọmụma ọkachamara nke ndị ọkachamara ụlọ ọrụ ọkụ eletrik Schneider, yana data ndị ahịa, site na nghọta data, iji nyere ndị ahịa aka nyochaa nsogbu. Nke anọ bụ ọrụ dị na saịtị. Dịka ọmụmaatụ, nye ntinye ụlọ, nrụpụta na ọrụ ndị ọzọ iji debe akụrụngwa ahụ n'ọnọdụ dị mma maka ịrụ ọrụ ogologo oge.
N'ihe banyere ọrụ saịtị, Zhang Lei kwenyere na maka ndị na-enye ọrụ, iji nyere ndị ahịa aka idozi nsogbu, ha ga-aga na saịtị ndị ahịa wee chọpụta nsogbu niile dị na saịtị ahụ, dịka njirimara nke ngwaahịa eji ubi, gini bu usoro ike, na gini bu usoro mmeputa. Ha niile kwesịrị ịghọta, nna ha ukwu, chọta ma dozie nsogbu ndị ahụ.
N'ime usoro inyere ndị ọrụ aka ime mgbanwe dijitalụ, ndị na-enye ọrụ kwesịrị inwe nghọta miri emi banyere teknụzụ na ndapụta azụmaahịa. Maka nke a, ndị na-enye ọrụ kwesịrị ịrụsi ọrụ ike na nhazi, usoro azụmaahịa na ọzụzụ ndị ọrụ.
“N'ime usoro nhazi nke Schneider Electric, anyị na-akwado ma na-ewusi ụkpụrụ nke mwekota ike. Mgbe anyị na-atụle ihe owuwu ụlọ ọ bụla na teknụzụ ọhụụ, anyị na-atụle ngalaba azụmahịa dị iche iche ọnụ, “Zhang kwuru. Tinye usoro azụmahịa na usoro dị iche iche iji mee ka usoro ihe niile dị na ya, na-echebara ọnọdụ niile echiche. Na mgbakwunye, anyị na-etinyekwa oke mkpa maka ịkọ ndị mmadụ, na-enwe olileanya ịtụgharị onye ọ bụla n'ime onyinye dijitalụ. Anyị na-akwado ndị ọrụ ibe anyị na-eme ngwanrọ na ngwaike ka ha nwee echiche dijitalụ. Site na ọzụzụ anyị, nkọwa ngwaahịa na ọbụlagodi ịga na saịtị ndị ahịa ọnụ, anyị nwere ike ịghọta mkpa ndị ahịa na mpaghara dijitalụ na otu esi ejikọta na ngwaahịa anyị dị. Anyị nwere ike ịkwalite ma jikọta ibe anyị”
Zhang Lei kwuru na n'ime usoro mgbanwe mgbanwe dijitalụ, otu esi enweta nguzozi n'etiti uru na ụgwọ bụ okwu dị mkpa. Ọrụ dijitalụ abụghị usoro ọrụ dị mkpirikpi, mana usoro dị ogologo oge. O metụtara usoro ndụ dum nke akụrụngwa, sitere na afọ ise ruo afọ iri.
“Site na akụkụ a, ọ bụ ezie na a ga-enwe ego na afọ mbụ, uru ga-eji nwayọ gosipụta na usoro niile nke ọrụ na-aga n'ihu. Na mgbakwunye, na mgbakwunye na uru ndị ahịa, ndị ahịa ga-ahụkwa ọtụtụ uru ndị ọzọ. Iji maa atụ, ha nwere ike inyocha ụdị azụmaahịa ọhụrụ iji jiri nwayọ gbanwee azụmaahịa ha na azụmaahịa mgbakwunye. Anyị achọtala ọnọdụ a mgbe anyị na ọtụtụ ndị mmekọ na-emekọrịta ihe. ”Zhang Lei kwuru. (Edere isiokwu a site na akụ na ụba kwa ụbọchị, onye na-ede akụkọ yuan Yong)
Post oge: Sep-27-2020